> Resource > Mac > 3 hab oo loo sameyn Data Rescue Mac Si fudud
Mac OS X waxa uu noqday mid ka mid ah nidaamyada hawlgalka ugu caansan ee ay u gaar ah oo isku dhafan teknoolajiyada, muuqaalada iyo waxqabadka. In kastoo nidaamka Mac waxaa loo arkaa mid aad u badan xooggan, taas macnaheedu ma xog gaartay in ay tahay wax aan macquul aheyn, taasna waa sababta lagula talinayaa in ay qaataan gurmad joogto ah oo ka mid ah xog muhiim ah. Laga yaabaa in aan waayi xogta laga nidaamka Mac ay sabab u tahay dhowr sababood oo u baahan in la sameeyo samatabbixinta xogta Mac .
Xaaladda Loss Data
Mac mashiinka cillad (waxyeello macquul ah)
Marka Mac drive ku guuldareysto, waxaan laga yaabaa in aanay u helaan ee files muhiim ah oo ka soo gudbaya dhaqanka yaab leh oo ah habka. Calaamadaha ugu caansan ee ah Mac drive xun waa sida soo socota:
• habka File musuqmaasuqa
• digsi la aqrin
• No nidaamka file mountable; drive adag oo aan la Jaha karo
• Khaladaadka halka helitaanka mugga gaar ah oo Macintosh HD
• The Macintosh computer si toos ah reboots
Howlgal aan habboonayn Human (baadi aadanaha)
• dhaco ama si ula kac ah u tirtirto xog qiimo leh sida Command + Delete, iyo faaruqinta qashinka bin
• Qaabka HD aan gurmad
• howlgal kale oo aan habboonayn ee Mac
• inflection Virus / weerarkii
• filayn korontadu
All dhibaatooyinka kor ku xusan ee khasaaraha Xog magdhaw macquul ah. Drive waa awood leh, laakiin ma heli karaan macluumaadka, codsiga, iyo xataa nidaamka ka hawlgala kaydiyaa it on.
3 jidadkooda Data Rescue Mac
Sida waxa kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aan sabab u tahay sababo kala duwan lumin xogta naga qiimo leh ka soo Mac OS X. Xal waa kala duwan yihiin oo ku salaysan sababta. Si aad u samayn samatabbixinta xog Mac , waxa aan marka hore si loo ogaado sababta dhabta ah ee khasaaraha xogta samayn. Sameynta samatabbixinta xogta (Mac) xal munaasib ahayn laga yaabaa in xaaladda ka sii dari.
Wixii khasaare xogta ay sabab u tahay Mac mashiinka cillad , waxaan isku dayi karaan in ay badbaadiyaan xogta Mac iyadoo la kaashanayo 'Disk Utility' , utility ah hidi ee nidaamka qalliinka Mac OS X in eegi kartaa sharaf iyo joogta ah Macintosh HD.
Wixii khaladaad aadanaha , waxaan samayn karaa samatabbixinta xog Mac la Time Machine . Waqtiga Machine had iyo jeer ka dhigaysa gurmad xogta naga saacad kasta. Marka aan laga badiyay xogta, kaliya inaad galiso Time Machine browser, oo aan soo kaban karto, aad files Mac ka Time gurmad Machine.
Haddii digsi Utility iyo Machine Time ma aan samayn karo samatabbixinta xog Mac noo, waxaan u baahan karnaa in ay isticmaalaan party- Mac software saddexaad kabashada xogta si aad u badbaadiso xogta Mac. Wondershare Data Recovery for Mac bixisaa samatabbixinta xog wax ku ool ah Mac oo dhan dhibaatooyin khasaaro xogta kor ku xusan. Waxaa badbaadin karaan xogta Mac lumay ay sabab u tahay la tirtiro, formatting, weerar virus, nidaamka file musuqmaasuqa, lama filaan ah korontadu iyo burbur kale oo macquul ah.
Download Free Wondershare Data Recovery for Mac